किन पलायन हुन्छन् गुरुङ नायिका ? - प्रसंग - साप्ताहिक
किन पलायन हुन्छन् गुरुङ नायिका ?
झन्डै २२ वर्षको इतिहास बोकेको गुरुङ चलचित्रका मुख्य भूमिकामा प्रस्तुत हुने अभिनेत्री (महिला कलाकार) हरूको यात्रा लामो हुन सकेको छैन । वैवाहिक जीवनमा बाँधिनु तथा विदेश पलायन हुनुलाई गुरुङ चलचित्रका नायिकाहरूको अभिनय निरन्तरताको अवरोधक मानिएको छ । पोखरा तथा आसपासका क्षेत्रमा निर्माण हुने गुरुङ चलचित्रलाई गुरुङ समुदायले नै चलायमान बनाएको छ । गुरुङ चलचित्रलाई व्यवसायभन्दा पनि संस्कार र संस्कृतिको संरक्षणका रूपमा बुझ्ने प्रवृत्ति छ ।
पहिलो गुरुङ चलचित्र ‘पाते’ का नायिका अनु गुरुङ र विनिता गुरुङ यतिबेला निष्क्रिय छन् । शुक्ला गुरुङ, शोभा गुरुङ, पार्वती गुरुङ, तारा गुरुङ, कल्पना गुरुङ, सुनिता गुरुङ, सोनाली गुरुङ, लक्ष्मी गुरुङ, विनिता गुरुङ, कमला गुरुङ, मीना गुरुङ, मीरा गुरुङ, शान्ति गुरुङ, अनिता गुरुङ, नवीना गुरुङ, दुर्गा गुरुङ, मनीषा गुरुङ, वसन्ती गुरुङजस्ता नायिकाहरू चलचित्र क्षेत्रबाट पलायन भए । सनम गुरुङ, रुविना गुरुङ, प्रतिक्षा गुरुङ, दिप्ति गुरुङ, प्रमिला गुरुङ, सोविन गुरुङ, सीता गुरुङ, डिना गुरुङ, रुपा गुरुङ, रत्ना गुरुङ, झरना गुरुङ, विन्दु गुरुङ, अन्जना गुरुङ, रोशनी गुरुङ, काजल गुरुङ, एलिना गुरुङ पनि अहिले अभिनयमा देखिँदैनन् । उनीहरूमध्ये अधिकांश विदेशमा छन् । केही स्वदेशमै वैकल्पिक पेसामा लागेका छन् भने केहि गृहिणीमै सीमित भएका छन् ।
अनुता गुरुङले एक दर्जन गुरुङ चलचित्रमा अभिनय गरिसकेकी छिन् । ‘चोखोमाया’ बाट ‘जिउँदो लास’ सम्ममा आइपुग्दा अनुताले गुरुङ चलचित्रमै आफ्नो परिचय बनाइन् । उनलाई पनि लामो समय यो क्षेत्रमा टिक्छु भन्ने विश्वास भने छैन । ‘यो क्षेत्र राम्रो त छ, तैपनि लामो समय टिकिँदैन, विवाह नभएसम्म मात्र हो, अनुता भन्छिन् । चलचित्रको छायांकनका लागि हिमाली क्षेत्रमा जानुपर्छ, बस्ने ठाउँ राम्रो हुँदैन, बिरामी हुँदा सहनुपर्ने हुदाँ पुरुषको तुलनामा महिला कलाकारलाई बढी गाह्रो हुन्छ, तैपनि संघर्ष गर्न सक्ने सम्भावना बोकेका कलाकारको भविष्य उज्ज्वल नभएको पनि होइन ।
गुरुङ चलचित्र ‘धीँ’ बाट उदाएकी नायिका रजनी गुरुङले ‘प्रे–सोना’ सम्म आइपुग्दा एक दर्जन चलचित्रमा अभिनय गरिन् । पहिलेको तुलनामा अहिले गुरुङ चलचित्रको दायरा बढ्दै गएको उनको अनुभव छ । ‘पारिवारिक चलचित्र हुने भएकाले गुरुङ चलचित्रमा काम गर्न सजिलो छ, उनले भनिन्— ‘यद्यपि यो क्षेत्रमा लागेर वर्तमानको आर्थिक अवस्था ठिकै भएपनि भविष्य अन्यौलपूर्ण छ ।’
त्यसो त केही नायिकाहरू गुरुङ चलचित्रकै कारण अभिनयमा जमेका पनि छन् । अनुता गुरुङ, रजनी गुरुङ, जसु गुरुङ, उर्मिला गुरुङ, रसिला गुरुङ, निसा गुरुङ आदि यसका उदाहरण हुन् । केही कलाकार भने गुरुङ चलचित्रलाई भर्‍याङ बनाउँदै नेपाली चलचित्रसम्म पुगेका छन् । रजनी गुरुङले टलक जंग भर्सेज टुल्केमा अभिनय गरिन् । रिस्मा गुरुङले ‘कबड्डी’, ‘कबड्डी कबड्डी’ तथा ‘झुम्की’मा काम गरेर चर्चा कमाइन् । ‘घलेक’बाट उदाएकी राष्ट्रिय भलिवल खेलाडी सिपोरा गुरुङले ‘भुइ मान्छे’मा पनि अभिनय गरिन् । रञ्जिता गुरुङ भने नेपाली चलचित्र ‘गोर्खा पल्टन’ मा अभिनय गरेर गुरुङ चलचित्रतर्फ आइन् । ‘सर्वेता’ उनको पहिलो गुरुङ चलचित्र हो ।
जसु गुरुङ कोरसका रूपमा चलचित्रमा छिरेर विस्तारै साइड डान्सर कोरियोग्राफर, नायिका, निर्देशक हुँदै व्यवसायमा सक्रिय छिन् । यो क्षेत्रमा लागेर आम्दानी पनि रामै्र भएको उनले सुनाइन् ‘आम्दानी राम्रो छ घरमा माग्नु पर्दैन’ । गाउँ तथा पर्यटनसम्बन्धी गीतको म्युजिक भिडियोमा काम गर्ने नायिकाहरू पनि उत्तिकै छन्, जसमा रजनी, अनुता, रसिला, इन्दु, उर्मिला, सविना, झरना तथा वर्षा बढी व्यस्त छन्।गुरुङ चलचित्र एसोसिएसन नेपाल (जिफान) का अध्यक्ष वेद बहादुर गुरुङ चलचित्रमा महिला
कलाकारहरू लामो समय टिक्न नसकेको बताउँछन् । ‘एक–दुई चलचित्रमा देखिन्छन् अनि हराउँछन् भने अधिकांश नायिका विवाह पछि पलायन हुन्छन्’ उनले भने । पारिश्रमिक बिना काम नगरेपनि खान लाउन पुग्ने र आफ्नो स्टाटसलाई मेन्टन गर्न गाह्रो हुने भएकाले निरन्तरतामा समस्या आएको उनको बुझाइ छ ।म्युजिक भिडियोमा अभिनय गर्दा नायिकाहरूले औसत १० हजार देखि २५ हजारसम्म तथा गुरुङ चलचित्रमा ५० हजार देखि बढीमा १ लाख रुपैयाँसम्म पारिश्रमिक लिन्छन्। सिपोराले ‘याम्फावती दि प्रिन्सेस’ मा ६ लाख रुपैयाँ लिएको बताइन्छ । केही प्रतिभावान् कलाकार भने परिवारले अनुमति नदिँदा आफ्नो प्रतिभा देखाउन वञ्चित भएको गुनासो गर्छन् । छायँंकनस्थलमा पुगिसकेका कलाकार परिवारले स्वीकृत नदिँदा फिर्ता हुनु परेको घटना पनि छन् ।
गुरुङ चलचित्रको मुख्य बजार कास्की जिल्ला नै हो भने काठमाडौँ, लमजुङ, तनहुँ, स्याङ्जा, गोर्खा, पर्वत, चितवन, रुपन्देही तथा नवलपरासीमा पनि गुरुङ चलचित्रको राम्रै बजार छ । पछिल्ला दिनमा भारतको सिक्किम, दार्जीलिङ आदि ठाउँमा समेत गुरुङ चलचित्रबाट राम्रै आम्दानी हुन थालेको चलचित्रकर्मीहरू बताउँछन् । त्यसो त गुरुङ चलचित्र हङकङ, जापान, कोरिया, युकेलगायत खाडी मुलुकमा कार्यरत नेपालीहरूमाझ समेत प्रदर्शन गरिन्छ ।